Hery - Tsiky dia ampy | Janoary 2015 |
Hay tena nisy i Alan Turing
2015-01-21 @ 13:29 in Sarimihetsika, Tsy aritra
Alohan'ny tena resaka dia tsetsatsetsa tsy aritra kely mikasika ilay tenin'ny Papa omaly hoe tokony ho tompon'andraikitra ny raim-pianakaviana. Tsy tokony hitondra tena toa ny bitro katolika. Ny tena noteneniny dia hoe "Misy ireo miteny hoe ny katolika tokony hanao toa ny bitro... tsia... tsia". Avy eo moa izy nanazava ny ato hoe ray amandreny tomponandraikitra. Fanamarihana kely fotsiny fa hay tsy fantatry ny maro hoe ny Katolika dia tsy manaiky ny fanabeazana aizana afatsy ny natoraly. Izany hoe tsy manaiky fatotra, kapaoty, fanafody, FI.SA. Koa ny fanabeazana aizana hany voizina dia ny resaka fifadiana amin'ny fotoana maha lonaka. Izay no fitsipika sy foto-kevitra katolika. Ny tena katolika dia manarka an'io. Avy eo moa, toa ny lalàna rehetra io, misy ny mandika, misy ny tsy manaraka, fa tsy olan'ny mpanao lalàna intsony izany.
Fa ny tena resaka dia mety misy ifandraisany kely amin'izay ihany. Misy sarimihetsika mandeha amin'izao, "The Imitation Game", nanaitra ahy ny sombiny tamin'ny Youtube dia mba nijery aho. Tantara tamin'ny ady lehibe faharoa saingy tsy dia ilay ady amim-basy loatra fa ny taktika isan-karazany nitadiavana izay handresena ny Alemana. Ny alemana dia mampiasa tenimiafina amin'ny baiko alefany ho an'ny miaramila mpanafika. Azo vakiana tsara ny baiko saingy tsy fantatra hoe inona no tena heviny. Mila mahafantatra ny fifangaroan'ny tenimiafina vao afaka mahalala ilay tena baiko ao ambadiky ny baiko miseho. Ny tanjona izany raha te handresy dia ny mitady ilay tena baiko mba hahafahana miaro tena na manafika dieny mialoha. Izay no asa nampanaovina an'i Alan Turing lehilahy tsy dia mitovy amin'ny rehetra nefa nasaina nanao asa goavana noho ny faharanitantsainy... hitady ny tena dikan'ilay baiko. Tsy dia hotantaraiko amin'ny antsipirihany satria sarimihetsika vao nivoaka ihany ka sao dia mbola misy te hijery. Fa rehefa avy nahita an'ilay tantara aho dia nieritreritra hoe mety ho tena nisy tokoa izany tantara izany. Dia notadiavina tamin'ny Google dia hay tena nisy tokoa ny tantaran'i Alan Turing ary ny tantarany tokoa no asehon'ilay sarimihetsika.
Nanaitra voalohany aloha ny fomba nataon'ny olona tamin'izany fotoana izany ara-teknolojika. Toa tsy mampino rehefa mieritreritra ny finday sy ny solosaina amin'izao fotoana izao. Nefa dia tahaka izany tokoa no niantombohany. Ny kajy iray dia herinandro maro vao ahitan'ny milina valiny. Ny milina ampiasaina hanaovana izany kajy izany dia milanja an-taonina. Olona maro no miara-mieritreritra. Betsaka kokoa ny sakana kanefa betsaka kokoa ihany koa ny fikirizana. Toa mamantam-bonona ihany isika ankehitriny.
Fa nanaitra sy nahatonga saina koa ny fivoaran'ny fiaraha-monina rehefa mieritreritra hoe tamin'izany fotoana izany, izay tsy mbola 80 taona lasa akory izay, dia miafina sy voaheloka ireo izay manana fironana homosexuel. Amin'izao fotoana izao anefa izy ireo dia miantsoantso hanana zo be dia be toa ny hivady, hanana zanaka, tahaka ireo mpivady tsy mitovy ehy. Fandrosoana tokoa angamba.
Ny sombin-teny nanaitra tao anatiny sady azo entina hikirizana amin'ny fiainana dia ilay hoe "Indraindray dia ny olona izay tsy eritreretina hahavita na inona na inona no mahavita zavatra izay tsy eritreretin'ny olona ho vita." "Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine."
Baikom-pitolomana: manao, manao, manao hatrany (izay vita eo vita fa mila mahavita)
Toa izao ny resaka momba ny #imitationgame ao amin'ny twitter
Tweet riguardo #ImitationGame
Nahita portefeuille :-)
2015-01-06 @ 19:19 in Serasera.org
Noho ny antony mazava loatra dia tsy tena sarin'ny zavatra hita no hapetraka eto amin'ity resaka ity. Fotoanan'ny krizy lahatsoratra koa izao (vakansy sns) koa dia itony tantara itony no tantaraina :-)
Avy niara-nivavaka sy nifampiarahaba tratry ny taona tamin'ny namana protestanta izahay ny alahady hariva (rehefa avy nahavita ny anjaran'ny Katolika ny maraina), dia alohan'ny hidirana tao anaty fiara dia nahita poketra (portefeuille) teo amin'ny tany. Nalaina dia nisy cartes de credit maro be tao anatiny (10, eny 10) ary nisy taratasy famelàna hitondra fiara sy taratasy madinika maromaro. (tohiny)